Kungani ukubuya kweNkosi kubandakanya ukuba Kwayo yinyama njengeNdodana yomuntu ukuze izembule ngokwayo esintwini? | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
UNkulunkulu waba inyama ngenxa yokuthi ihloso yomsebenzi wakhe akuwona umoya kaSathane, noma into engaphili, kodwa umuntu, oyinyama owonakaliswe uSathane. Lokho kungenxa kanye yokuthi inyama yomuntu yonakalisiwe ukuthi uNkulunkulu wenze umuntu wenyama injongo yomsebenzi Wakhe; ngaphezu kwalokho, ngenxa yokuthi umuntu uyinjongo yenkohlakalo, wenze umuntu waba iyona kuphela injongo yomsebenzi Wakhe kuzo zonke izigaba zomsebenzi Wakhe wensindiso. Umuntu uyisidalwa esifayo, uyinyama negazi, futhi uNkulunkulu Nguye Yedwa ongasindisa umuntu. Ngale ndlela, uNkulunkulu kumele abe inyama enakho konke umuntu anakho ukuze umsebenzi Wakhe, ukuze futhi umsebenzi Wakhe ube nemithelela engcono. UNkulunkulu kumele abe inyama ukuze enze umsebenzi Wakhe, ngenxa kanye yokuthi umuntu uyinyama, futhi akakwazi ukunqoba isono nokuzehlukanisa nenyama. …
Kubo bonke labo abaphila enyameni, ukuguqula isimo sabo kudinga ukuthi babe nemigomo yokulandelwa, futhi ukwazi uNkulunkulu kudinga ukuba ukufakaza ngezenzo Zakhe zangempela nobuso Bakhe bangempela. Kokubili lokhu kungafezwa ngenyama kaNkulunkulu osesimweni somuntu kuphela, futhi kokubili kungafezwa kuphela ngenyama evamile nengokoqobo. Yingakho ukuba sesimweni somuntu kudingekile, futhi yikho okwenza adingwe yiso sonke isintu esikhohlakele. … Ezigabeni ezintathu zomsebenzi kaNkulunkulu, sisodwa isigaba esenziwa siqondiswa uMoya, futhi ezinye izigaba ezimbili zaziqondiswa uNkulunkulu osesimweni somuntu, zingaqondiswa uMoya ngokuqondile. Umsebenzi womthetho owenziwa uMoya wawungabandakanyi ukushintsha isimo esikhohlakele somuntu, futhi awuzange udinge noma yiluphi ulwazi lomuntu ngoNkulunkulu. Umsebenzi wenyama kaNkulunkulu eNkathini Yomusa naseNkathini Yombuso, uhlanganisa isimo somuntu esikhohlakele nolwazi lwakhe ngoNkulunkulu, futhi uyingxenye ebalulekile nebucayi yomsebenzi wensindiso. Ngakho, isintu esikhohlakele siyidinga kakhulu insindiso kaNkulunkulu osesimweni somuntu, futhi siwudinga kakhulu umsebenzi oqondile kaNkulunkulu osesimweni somuntu. Isintu sidinga ukuba uNkulunkulu osesimweni somuntu aseluse, aseseke, asiphuzise, asondle, asahlulele futhi asijezise, futhi siwudinga kakhulu umusa nokutakulwa uNkulunkulu osesimweni somuntu. UNkulunkulu wenyama kuphela, ongaba ithemba lomuntu, umelusi womuntu, nosizo lwamanje lomuntu, futhi konke lokhu kuyisidingo sikaNkulunkulu osesimweni somuntu namuhla nasezikhathini ezedlule.
kwesithi “Isintu Esikhohlakele Siyidinga Kakhulu Insindiso KaNkulunkulu Obe Inyama” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni
Uba yinyama ngoba inyama ingakwazi nayo ukuba negunya futhi uyakwazi ukwenza umsebenzi kubantu ngendlela engokoqobo, ebonakalayo nethintekayo kumuntu. Umsebenzi onjalo uba ngokoqobo kakhulu ngokwengeziwe kunoma yimuphi umsebenzi owenziwa ngokuqondile nguMoya kaNkulunkulu onegunya lonke futhi imiphumela yawo nayo isobala. Lokhu kungoba inyama Yakhe ingakhuluma futhi yenze umsebenzi ngendlela engokoqobo; isakhiwo sangaphandle senyama Yakhe asinagunya futhi umuntu angafinyelela kuso. Ingqikithi Yakhe inegunya kodwa igunya Lakhe alibonakali kumuntu. Lapho ekhuluma nalapho esebenza, umuntu akakwazi ukubona ukuthi kukhona igunya Lakhe; lokhu kuba kuhle nakakhulu emsebenzini Wakhe ongokoqobo. Futhi yonke imisebenzi enje ingaba nemiphumela. Ngisho kungekho muntu obonayo ukuthi unegunya noma obonayo ukuthi akanakucasulwa noma abone ulaka Lwakhe, ngegunya Lakhe elifihlakele, ulaka nokukhuluma obala, uzuza imiphumela ayihlosile yamazwi Akhe. Ngamanye amazwi, ngesimo sephimbo Lakhe, ukuqina kwenkulumo kanye nokuhlakanipha kwamazwi Akhe umuntu uyakholwa ngokugcwele. Ngaleyo ndlela, umuntu uyazinikela emazwini kaNkulunkulu osenyameni, obonakala engenalo igunya, ngaleyo ndlela afeze inhloso Yakhe yokusindisa umuntu. Lokhu okunye ukubaluleka kokuba Kwakhe senyameni: ukukhuluma ngokwengeziwe ngokoqobo futhi avumele ubuqiniso bamazwi Akhe ukuba bube nomthelela kumuntu ukuze babone amandla ezwi likaNkulunkulu. Ngakho lo msebenzi, uma ungenziwa ngokuba senyameni, ngeke ube ngisho nemincane imiphumela futhi ngeke uzisindise izoni. Uma uNkulunkulu engabi yinyama, uhlala enguMoya ongabonakali futhi ongathinteki kumuntu. Umuntu uyisidalwa esiyinyama futhi umuntu noNkulunkulu bangabasemihlabeni emibili engafani nengafani ngemvelo. UMoya kaNkulunkulu awuhambisani nomuntu wenyama futhi akukho ukuhlobana okungakheka phakathi kwabo; ngaphezu kwalokho, umuntu akakwazi ukuba umoya. Ngaleyo ndlela, uMoya kaNkulunkulu kumele ube ngesinye sezidalwa futhi wenze umsebenzi Wakhe wokuqala. UNkulunkulu angenyukela endaweni ephakeme aphinde azithobe abe umuntu oyisidalwa, enze umsebenzi futhi aphile nabantu, kodwa umuntu akakwazi ukwenyukela ezindaweni eziphezulu abe ngumoya futhi kukancane kakhulu ukuba umuntu ehlele phansi. Ngakho, uNkulunkulu kumele abe yinyama ukuze enze umsebenzi Wakhe. Njengokuba senyameni kokuqala, yinyama kaNkulunkulu osenyameni kuphela eyayingahlenga isintu ngokubethelwa Kwakhe, kuyilapho kwakungeke kwenzeke ukuba uMoya kaNkulunkulu ubethelwe njengomnikelo wesono somuntu. UNkulunkulu angaba yinyama ukuze asebenze njengomnikelo wesono soumuntu kodwa umuntu akakwazanga ukunyukela ezulwini ukuyozilandela umnikelo wesono uNkulunkulu ayewulungiselele bona. Ngaleyo ndlela, uNkulunkulu kumele ahambe kulezi zindawo zombili, ezulwini nasemhlabeni, kunokuba enze ukuba abantu banyukele ezulwini ukuze bathathe insindiso, ngoba umuntu uwile futhi akakwazi ukuya ezulwini, futhi kukancane kakhulu ukuba athole umhlatshelo wesono. Kanjalo, kwakufanele ukuba uJesu eze phakathi kwabantu futhi azenzele mathupha umsebenzi owawungeke ufezwe ngabantu. Njalo lapho uNkulunkulu eba yinyama, kwakusuke kufanele ngempela ukuba enze kanjalo. Ukube esinye salezi zigaba sasingenziwa nguMoya kaNkulunkulu ngokuqondile, wayengeke abhekane nokwehliswa isithunzi ngokuba senyameni.
Into engcono kakhulu ngomsebenzi Wakhe enyameni ukuthi angashiya amazwi anembayo nentando Yakhe ecacile esintwini, kulabo abamlalelayo, ukuze ngemva kwalokho abalandeli Bakhe badlulise ngokunembayo wonke umsebenzi Wakhe wenyama nentando Yakhe kuso sonke isintu kulabo abayemukelayo le ndlela. Umsebenzi kaNkulunkulu wasenyameni kuphela phakathi kwabantu ofeza iqiniso lobukhona nokuhlala phakathi kwabantu kukaNkulunkulu. Yilo msebenzi kuphela ogcwalisa isifiso somuntu sokubona ubuso bukaNkulunkulu, ofakaza ngomsebenzi kaNkulunkulu, futhi uzwe izwi loqobo likaNkulunkulu. UNkulunkulu osesimweni somuntu uqeda inkathi lapho isintu sabona kuphela umhlane kaJehova, bese uqeda nenkolo yesintu kuNkulunkulu ongaqondakali. Ikakhulu, umsebenzi kaNkulunkulu wokugcina osesimweni somuntu uletha sonke isintu enkathini enokwangempela, enobuqobo, futhi ejabulisayo. Akagcini nje ngokuphothula inkathi yomthetho nemfundiso; okubaluleke nakakhulu, wembula esintwini uNkulunkulu ongowempela, ojwayelekile, olungile futhi ongcwele ovula umsebenzi wohlelo lokuphatha, aveze izimfihlakalo nesiphetho sesintu, owadala isintu futhi oqeda umsebenzi wokuphatha futhi obezifihlile izinkulungwane zeminyaka. Uletha inkathi yezinto ezingaqondakali ekupheleni, uphothula inkathi isintu esifisa ngayo ukubona ubuso bukaNkulunkulu kodwa singakwazi, uqeda inkathi isintu esikhonza ngayo uSathane, futhi aholele sonke isintu enkathini entsha. Konke lokhu kuwumphumela womsebenzi kaNkulunkulu enyameni esikhundleni sikaMoya kaNkulunkulu. Lapho uNkulunkulu esebenza enyameni Yakhe, labo abamlandelayo abasagcini nje ngokufuna ngemva kwalezo zinto eziyimfihlakalo nezingaqondakali, futhi bayayeka ukuqagela intando kaNkulunkulu ongaqondakali. Lapho uNkulunkulu esakaza umsebenzi Wakhe esenyameni, labo abamlandelayo kufanele badlulisele umsebenzi awenzile enyameni kuwo amahlelo nezinkolo, futhi bazokhuluma wonke amazwi Akhe ezindlebeni zaso sonke isintu. Konke okulalelwe yilabo abezwe ivangeli Lakhe kufanele kube amaqiniso omsebenzi Wakhe, kufanele kube yizinto umuntu azibonile futhi wazizwela zona, kufanele kube amaqiniso hhayi inzwabethi. La maqiniso awubufakazi asabalalisa ngabo umsebenzi Wakhe, futhi angamathuluzi awasebenzisayo ekusakazeni umsebenzi. Ngaphandle kokuba khona kwamaqiniso, ivangeli Lakhe lalingeke lisabalale kuwo wonke amazwe nakuzo zonke izindawo; wayengeke akwazi ukunqoba indawo yonke, wayeyogcina ngokukucabanga engqondweni. Umuntu akakwazi ukuthinta umoya futhi akawuboni, futhi umsebenzi wenyama awukwazi ukushiya ubufakazi noma amaqiniso ngomsebenzi kaNkulunkulu kumuntu. Umuntu akasoze abone ubuso bangempela bukaNkulunkulu, futhi uyohlala ekholwa kuNkulunkulu ongaqondakali ongekho. Umuntu akasoze abone ubuso bangempela bukaNkulunkulu, futhi ngeke ezwe amazwi uNkulunkulu awakhulume mathupha. Imicabango yomuntu, vele, iyize, ayinakungena esikhundleni sobuso bukaNkulunkulu bangempela; isimo sikaNkulunkulu semvelo, nomsebenzi Wakhe uqobo ngeke umelwe umuntu. UNkulunkulu ongabonakali osezulwini nomsebenzi Wakhe kungalethwa emhlabeni uNkulunkulu osesimweni somuntu kuphela ozenzela mathupha umsebenzi Wakhe phakathi kwabantu. Lena indlela enhle kakhulu uNkulunkulu avela ngayo kubantu, abantu abambona ngayo uNkulunkulu futhi bazi ubuso Bakhe, ngeke kufezwe uNkulunkulu ongekho esimweni somuntu.
Okwedlule：Kungani ukubuya kweNkosi kubandakanya ukuba sesimweni somuntu—ukwehla okufihlakele—kanye nokwehla okusobala ngamafu?
Okulandelayo：Kungani ukubuya kweNkosi ezinsukwini zokugcina kungabandakanyi ukubonakala kumuntu nokwenza umsebenzi Wakhe emzimbeni womoya?